आइसल्याण्डविरुद्ध नाइजेरिया २ -० ले विजयी
नाइजेरियाले आइसल्याण्डलाई २ शुन्यले हरायो ।
अर्जेन्टिनाको भाग्य फैसला गर्ने खेलः नाइजेरियाविरुद्ध आइसल्याण्ड
काठमाडौं । आज नेपाली समयअनुसार राति ८ः४५ मा सुरु हुने नाइजेरिया र आइसल्याण्डबीचको खेल अर्जेन्टिनाको लागि महत्वपूर्ण छ । समूह ‘डी’ मा रहेका यी दुई राष्ट्रको खेलले अर्जेन्टिनाको विश्वकप यात्रा टुंगिने हो या सम्भावना कायमै रहन्छ भन्ने तय गर्छ ।
विश्वकपमा आज तीन खेल हुँदै, कुन खेल कति बजे ?
काठमाडौं । रसिया विश्वकपको समूह चरणको दोस्रो खेल जारी छ । आज शुक्रबार पनि तीन वटा खेलहरु हुँदैछन् । आज समूह ‘ई’ को दुई खेल र समूह ‘डी’ को एक खेल हुँदैछ ।
यी नेपाली कसरी रसिया पुगेर अर्जेन्टिनालाई समर्थन गरे ?
काठमाडौं । केही नेपाली अर्जेन्टिना र आइसल्याण्डबीचको खेलको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न पाएका छन् । शनिबार साँझ सम्पन्न उक्त खेलमा नेपाली झण्डासहित नेपालीहरु स्पार्ताक रंगशालमा उपस्थित भएका थिए ।
आइसल्याण्डसँगको बराबरीपछि मेसीले के भने ?
काठमाडौं । पहिलो पटक विश्वकप खेलेको युरोपियन राष्ट्र आइसल्याण्डसँग १–१ गोलको बराबरी खेलेको अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले खेलपछि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रिभ्युः विश्वकप दाबेदार मानिएको अर्जेन्टिनाले पराजित गर्ला त आइसल्याण्डलाई ?
अर्जेन्टिनालाई रसिया विश्वकको उपाधि जित्ने दाबेदार राष्ट्रको रुपमा हेरिएको छ । आइसल्याण्डको भने यो नयाँ अनुभव हुनेछ । हालसम्म २ पटक मात्रै
घानाको उत्कृष्ट कमब्याक, आइसल्याण्डलाई बराबरीमा रोक्यो